Betboo Bonuslari 2020 | Ikheli lokungena leBetboo - Betboo ilk üyelik bonusu | bookmakers-tr.icu
Home>>Bahis Türkiye>>Amabhonasi weBetBoo
IBetboo inikeza amathuba amaningi ahlukahlukene ahlobene nebhonasi oyilethile. Ngale ndlela, ungafinyelela zonke izinhlobo zamathuba ahlukile.. Izinhlelo kufanele ziqondiswe kahle mayelana nalolu daba.. Ngenkathi unikeza ulwazi ngalezi zinto ezenziwayo, noma kunjalo, kuyadingeka ukuthatha konke mayelana nezinsizakalo zomemukeli ngolwazi lwabo..
Ngaphandle kwalokho, uzohlangabezana nezimo ezingezinhle.. Uma ungahlangani nezinsizakalo zomthengi ekuqaleni kwalezi zimo ezingezinhle, njengoba ufisa, ukungatholi imiphumela, futhi, Izimo ezinjengokungatholi ibhonasi noma ukuhlunga lokho okutholile kubhonasi zingavela.. Ngakho-ke, konke ukuthengiselana okudingekile kufanele kwenziwe ekulandeleni okuyikho.. Uma wenza imisebenzi edingekayo ngale ndlela, ngeke ube nezinkinga..
Sizonikeza imininingwane mayelana nomvuzo weBetuboo kanye nezinzuzo zokuphromotha. Amabhonasi abalulekile kumasayithi okubheja ngoba andisa imali engenayo. Uma sibheka kule ndlela, singasho ukuthi amabhonasi weBetboo nawo abalulekile.. Kunomvuzo ofanele esizeni.
Ayini amabhonasi weBetboo nama-Promotions?
Njengomusa sizokhuluma ngebhonasi elamukelekile. Esizeni, kukhona ibhonasi yokutshala enomusa kanye nebhonasi yamahhala.. Ibhonasi yokutshala imali yomusa 300 Kufika ku-TL, sizokhuluma ngemithetho yaleli bhonasi ekuqhubekeni kwesipelingi sakho. Umvuzo wamahhala ubizwa ngokuthi ibhonasi ye-Live Club.. Ukuthola ibhonasi yamahhala, vele ubhalisele isiza mahhala.. Ukufingqa, akudingeki ukuthi ufake imali esizeni.
Enye ibhonasi yeBetboo ingemva kokubhalisa 30 isebenza ngosuku.
Lapho kufakwa imali ngemuva kokuthengiselana ngobulungu, 30 ngaso sonke isikhathi lapho wenza idiphozi phakathi nosuku 0 isilinganiso esinikezwe futhi 300 Ungazuza kubhonasi yokutshalwa kwemali efinyelela ku-TL.. Lo mvuzo usebenzela izinkokhelo ozenzayo ukubheja kwezemidlalo..
Kufanele unake lesi simo. Omunye umvuzo ibhonasi elahlekile. Ukulahlekelwa ibhonasi emidlalweni yokubheja yemikhuba 3.000 Kufika ku-TL. Ngale nkokhelo ungabuyisa ufulawa owulahlile ekubhejisweni kwezemidlalo.
Uma ubuncane besigaba sokubheja kwezemidlalo 5 uma ubheja ungawasebenzisa ngokunenzuzo amabhonasi amahhala. Le midlalo ekhethekile ishicilelwa esizeni nsuku zonke. Uma wenza isigqebhezana naleyo midlalo ngokulandela ngokucophelela, ungazuza emathubeni wemivuzo yamahhala..
Isinono 100 Tl uzokwenze njani 4 ngokubheja okuhlanganisiwe okungakhethwa 3.000 Ungathola ukubuyiselwa imali kuze kufike ku-TL. Ngaphezu kwalokho 10 ukubuyisa ukuvula kunikezwa futhi njengesipho. Njengoba ukwazi ukubona, ungaphumelela amabhonasi e-Betboo ahlukile futhi azuzisayo kuyo yonke indawo yesiza..
I-Betboo 600 Yiziphi Izici zeBonasi Wobulungu Bokuqala be-TL?
Ibhonasi yemikhonzo yeBetboo, isigaba sezingane sidonsela ukunakekela njengomkhankaso onenzuzo. Izici zimi kanjena;
kepha ngabantu kuphela abangamalungu wezikhathi zomusa.
Inani lokutshalwa kwemali okuncane 25 Kunqunywe ku-TL.
Ngemuva kokubhalisela i-akhawunti yakho 30 Kufanele ulayishe leli nani esikhathini nsuku zonke.
Inani ongalithola kakhulu 600 Ingabe i-TL.
amaphesenti 150 ngokufanayo kunesilinganiso esiphakeme kakhulu.
IBetboo ikulethele amabhonasi Ngabe ibhonasi ilungile ukuyisebenzisa?
Beboo wamukelekile ibhonasi nguwe esizeni 0 Ngaphandle kokulethwa njengoba, Ukuze usebenzise le bhonasi onikezwe yona ukulungisa, kuyadingeka ukuthi udlulise imininingwane edingekayo ezinhlelweni zokuthenga ezizohanjiswa kwi-akhawunti yakho kuqala.. Ngemuva kwalokho futhi, uhlelo oludingekayo luhlinzekiwe. Ngale ndlela, ngokwenza ukuthengiselana okudingekile, uzobe usufinyelele ezinhlelweni ezidingekayo ngendlela elula kakhulu.
Ngaphezu kwalokho, kungadingeka ukusho lokho, 1.70 lapho kudingeka ukubheja emidlalweni enezinkinga, amasistimu ahlukene anikezwa amakhuphoni wokuhlanganisa kunqunyelwe. Ngalesi sizathu, ungathola imininingwane engxenyeni yamabhonasi phakathi kwesiza., noma kunjalo, ungathola imininingwane yesevisi yamakhasimende njengoba kudingeka..
I-Betboo yamukela ibhonasi Yobulungu
Kunemithetho eminingana yebhonasi yobulungu enomusa, efana naleyo esasisho lapho sikhuluma ngamabhonasi.. Njengomusa, amalungu kuphela enza idiphozi lomusa angazuza kule bhonasi..
Ngaphezu kwalokho, lo mvuzo utholakala kwilungu ngalinye. 1 izikhathi ezinikezwe. Isibonelo, ngemuva kokubhalisa kwisiza, ukubeka imali, Uma wenza okunye ukuthengiselana ngemali ngaphandle komvuzo, ngeke ukwazi ukuzuza kubhonasi lobulungu bomusa weBetboo.. Kufanele ucabangele lezi zimo futhi uqaphele kakhulu. Ngoba amabhonasi alahlekile kungenzeka abuyiselwe imali.
Yini imigomo yeBetboo Cycle?
I-betboo ubulungu obunomusa, Iqembu linemibandela yomjikelezo. Imali ingathathwa isetshenziswe kwezinye izindawo, Kungenzeka ngokuhambisana nezinqubo ezifanele. Kungenzeka ukufingqa kanjena ngokulandelayo;
Lapho konke lokhu kuhunyushwa kusamba sokutshalwa kwemali, kakhulu 200 Ibhonasi yokugembula ye-TL iyatholakala. Izinga lalokhu ngamaphesenti 50 kubikwe ukuthi.
Ngaphezu kwalokho 400 Amaphesenti umkhawulo we-TL 100 kungenzeka futhi ukuthola isipho samahhala ngesilinganiso.
Umjikelezo kufanele uqedwe phakathi nesikhathi esibekiwe sokusebenzisa umkhankaso ofanele.. Lesi sikhathi 30 kuvezwe ngezinsuku.
Okungenani ekusebenzeni komjikelezo 1.2 kufanele kwenziwe ngokwesilinganiso se. Leli zinga kufanele lihambisane nakulo lonke ukhetho..
Ibhola ebukhoma ekuguqukeni imali, ukubheja kwezemidlalo, ithenisi elingokoqobo, umjaho wamahhashi wangempela, ungakhetha imidlalo efana ne-virtual dog Cliff kanye 1 ngezikhathi zokugoqa, ungathola imali efanele.
I-Backgammon enokubheja ichazwa njengemali, kulungile, baccarat, Ukugoqa akunakwenzeka ekushayweni komphefumlo wasehlane.
futhi; izinhloso zonke, ukugoqa akunakwenziwa ngezinhlobo ezizodwa zokubikezela.
Abantu ababambe iqhaza kulo mkhankaso, akunakwenzeka ukuthi uzuze kokunye ukukhushulwa ngasikhathi sinye.
Uhlelo lokuqinisekisa lwe-sms, ukuthinta uhlangothi lwelungu kungenye isidingo.
Labo abafuna ukuthola ibhonasi yobulungu bohlobo lweBetboo kufanele nakanjani bakhombise umugqa wokuvumelana nemibandela ebekiwe.. Ukuze uzuze emkhankasweni wemali yesipho ngokushesha ngemuva kokuba yilungu, okokuqala, kubalulekile ukuthi uchofoze engxenyeni yosizo ebukhoma.. Uzoxhumana ngokushesha nesiphathimandla sezinsiza zabantu ezokuxhumana online online ngokuzayo., udinga ukucela ukunyuswa okuhlobene. Ibhonasi ayithathi isikhathi eside ukulayisha. Masinyane ngemuva kwalokho, sidinga ukuzivumelanisa nezimo zokuguqula.. Ngakho-ke, umkhankaso wokubhalisa weBetboo uthathwa..
Idiphozithi yaseBetboo / ukuhoxiswa kwe-betboo
Ugunyazwe uhlangothi lweMalta, iBetboo noma kunjalo isebenza ngokuya ngemithetho yeCuracao.. Inkampani enezinkinga zokubheja eziphakeme kakhulu embonini, Ukuvela Kwemidlalo, I-Netent, Ixhaswe yizinkampani zezingqalasizinda zeMicrosoft Gaming.
Abathandi be-Bet bangasebenzisa ngokunenzuzo idiphozi yeBetboo, badlulise imali kuma-akhawunti abo, bese bakhuphula imali abayitholayo ngokuhlola izici ezinikezwayo.. Isibonelo, kwidiphozi lakho lomusa 600 Ungaba nebhonasi kuze kufike ku-TL. I-Betboo 600 Ungathola imininingwane enemininingwane mayelana nokuholelwa kokuqukethwe kwethu okunesiqalo se-TL Ibhonasi Yobulungu Bokuqala..
Enye yamasayithi aqinisekile ezweni lethu ebelokhu enikeza insizakalo engaphazamiseki kusukela ekuqaleni kuka-2000 yindawo yokubheja ebukhoma yaseBetboo enelayisensi yombuso waseMalta.. Selokhu kuvulwe isiza, yiba nomusa ngaphambi komdlalo wokusika, futhi inikeza ithuba lokudlala bukhoma phakathi nomdlalo. Ngesikhathi elapho, ngisho ngaleso sikhathi e-Turkey Ukubheja, wonke umuntu wayedinga uSpor Toto. Ngaleso sikhathi, iBetboo isivele idlule umdlalo wangaphambi, enikeza izaphulelo ezibukhoma nezesistimu.
Ukuze ukwazi ukuhoxisa imali ese-akhawunti yakho enkampanini yokubheja online, kufanele ungene ngemvume okokuqala ngegama lomsebenzisi nencwadi eyimfihlo.. Ungakhipha ngokuphepha ama-winnings akho ngokukhetha kusukela ezinketho zokuhoxisa ngokushesha ngemuva kwalokho.. Izindlela zokuhoxiswa kweBetboo kanye nemikhawulo;
Ukudluliselwa Kwebhange: Kuhlanganiswe nezindlela zokuheha ezivame ukusetshenziswa ngamalungu. Ngale ndlela, abasebenzisi abazokhipha imali kuma-akhawunti abo bangafinyelela kulayini wokusekelwa obukhoma bathole inombolo ye-akhawunti yamanje yesayithi.. Ubuncane phakathi kwezinsuku nge-Bank Transfer indlela 100 Ukukhishwa kwe-TL kwenziwa.
Izindlela Ezingokoqobo: amakhasimende, bangadubula kusuka kuma-akhawunti abo besebenzisa izindlela zokukhokha ezibonakalayo. Umkhawulo ophansi unqunyelwe lokhu 20 TLir. Udinga kuphela ukudubula ngale ndlela, kufanele ube ne-akhawunti ebonakalayo..
I-EFT blah ilula kakhulu ukukhipha imali esizeni sokubheja bukhoma seBetboo ngokudluliselwa kwebhange ngegama elidumile. Ukudluliselwa kwebhange le-EFT yigama elinikezwe ukudluliselwa lapho kwenzeka phakathi kwamabhange ehlukene. Ngakho-ke, bayinto efanayo. Kufanele wenze isicelo sokuhoxa ukuze uthole imali oyitholile kubheja lakho ku-akhawunti yakho yasebhange ngale ndlela.. Ukuze wenze lokhu, ngena ngemvume ku-akhawunti yakho. Masinyane ngemuva kwalokho iya ekhasini le- "Akhawunti Yami" kwesokudla bese uthola ifomu elithi "Ukuhoxiswa".
Ungahoxa kumabhange owabona kulesi sikrini.. Njengoba lolu hlu selushintshile ngezikhathi ezithile, ngeke sikwazi ukukunikeza uhlu, kepha uma kungekho nkinga yezobuchwepheshe, wonke amabhange amakhulu ngokujwayelekile.. Zonke izingosi ezinkulu nezincane zokubheja ezibukhoma ezihweba ezweni lethu ziyakwazi ukubhekana nokudluliselwa kwasebhange.. Enye yezinto ezenza iBetboo ibe nenhlanhla ukuthi akukho kuncishiswa kwekhomishini ngokudluliselwa..
ETurkey, Neteller wasuka emakethe emva kokuba nomdlali omkhulu Ecopayz ukubheja bukhoma isibe iyisibusiso ukuze abadlali umsebenzi ukubhoboza. Ngenxa yalokhu, isici esibaluleke kakhulu sokubheja bukhoma ukuthi imali yakho idluliselwa kwi-akhawunti yomdlalo lapho nje icacisa.. Ngokufana, ungahle ufune ukuyisa imali kwi-akhawunti yakho ngendlela esheshayo.. Ngokwemvelo, uma ungafuni ukubeka ukubheja okusha bese ukhipha imali ephephile. Sincoma i-Ecopayz ngaphandle kokungabaza kubasebenzisi abathanda ukukhishwa okusheshayo.. Kwesinye isikhathi imali yakho ingathunyelwa isuka eBetboo iye ku-akhawunti yakho ye-Ecopayz ngemizuzu nje embalwa. Cela ukuchitha usebenzisa ikhadi, cela, uhoxise, uma ufuna, ungatshala imali kwamanye amasayithi ukubheja futhi uxoshe amathuba okubuyisana.
Yize i-Ecopayz isiza sakwamanye amazwe, isisici esibalulekile sokuyokhonza eTurkey.. 2000 I-Ecopayz, ebilokhu isici kusukela unyaka, inezisebenzi eziningi zaseTurkey.. ngesonto 7 usuku 24 Leli sayithi, elihlinzeka futhi nenkonzo esekelayo ngaphezulu kwengxoxo ebukhoma, ifanelwe ngokuqonda.. Uma ungakholelwa ekhasini le-Services lithenga i-Ecopayz ngolimi lwaseTurkey, bheka. Sikukhumbuza ukuthi le ndlela yokuhoxisa imahhala..
Ingabe uBetboo uthembekile, Ingabe ikhona inkinga ezinkokhelweni ?
Uma ufuna ukuhlaziya ukuthembeka kwebhizinisi lokubheja, udinga ukubheka imininingwane yelayisense kuqala.. Inkampani, ehlanganyela imininingwane yelayisense obala nabasebenzisi bayo, iphephe kakhulu..
Ngaphezu kwalokho, ungahlaziya izindlela zokufaka nediphozi zokuhlaziya ukuthembeka.. Ukuze uthole lokhu, zama ijubane lezezimali ngokwenza imali encane.. Ukutshalwa kwemali kusayithi kulula kakhulu, kwenzeka kahle.
Ukuhlola ukuthembeka kwamazwana abasebenzisi kuzosiza igama. Noma yikuphi okuqukethwe okubi akusona isifundo uma ubheka ukubuyekezwa komsebenzisi kubhuki. Kungakho inkampani iphephe kakhulu. Ukwethenjwa kwezinkampani zokubheja ezinesitifiketi se-SSL kuphezulu. Imininingwane yabasebenzisi abasebenzisa ukubheja kweBetboo ifakwe ngemfihlo futhi ivikelwe. Lolu lwazi alwabiwanga nabangaphandle.. IBetboo, ebesebenza kulo mkhakha iminyaka eminingi, isezingeni eliphakeme kakhulu.
Ikhadi le-Visa Debit
Le ndlela ifana neTransfercard enikezwa yiBets10 indawo yokubheja bukhoma.. Kufanele ufake isiza bese ucela ikhadi. Leli khadi lizothunyelwa ekhelini olifunayo ngokushesha ngeposi. Lapho ikhadi lifika, ungaliqinisekisa bese uqala ukukhipha imali esizeni.. Iningi lokukhishwa okwenziwe ngale ndlela 1 imiphumela ngosuku. Ngemuva kwakho konke lokhu, lokhu kuyikhadi le-Visa esemthethweni emhlabeni jikelele. Nomaphi lapho uya khona emhlabeni, ungathenga nawo, Ungakhipha imali kwi-ATM, Ungadla, ungathenga noma yini oyifunayo online. Yini enye ongathanda ukuyenza??
Ingabe iBetboo Ufuna Imibhalo Ekuhoxisweni??
Ukubheja okubukhoma, ayidingi noma yimiphi imibhalo evela kuwe ngenkathi uyilungu. Ucela ukuthi ugcwalise imininingwane yakho neyama-akhawunti. Esikhundleni sokukhishwa kweBetboo, icela imibhalo yokuhoxiswa okuphezulu okungaguquki.. Ayiceli idokhumenti kwimikhawulo engaphansi yomkhawulo. Lokhu kungukuphepha kwe-akhawunti kuphela.
Indlela entsha yokuhoxisa yi-AstroPay. Ngale ndlela, i-Ecopayz ingadubula ngendlela efanayo. Izicelo ziqinisekiswa phakathi kosuku olufanayo futhi zingabukwa kuhlelo lokusebenza lwe-AstroPay kufoni yakho ephathekayo.. Masishane ngemuva kwalokho, ungashintsha leli khadi ulishintshe libe yimali.. Uma ufisa, ungathumela kumngane wakho noma uyihlanganise nezinye izinombolo zamakhadi akho e-AstroPay bese uzifaka kwenye indawo..
Ngiyethemba ukuthi lezi zindlela bezichazwa ngokwanele wena. Zizwe ukhululekile ukusibhalela ebhokisini lokuxhumana elisezansi lekhasi uma uneminye imibuzo. Sithemba ukuthi ukhipha imali eningi!
betboo mac izle